Siya kukuvuyela ukukwamkela kwigumbi lethu elitsha elinamagumbi amabini okulala, ikhitshi elahlukileyo, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo yabantu aba-2. Ukuba kuyimfuneko, siya kulungiselela iibhedi ezi-5 (ihotele esemgangathweni ibhedi eyongezelelweyo). Ibekwe kufutshane neziko; ukusuka kwindawo yokumisa i-150 m kude ungafumana ngqo kwiziko le-spa. Ukupaka kwisitalato sethu nakwindawo ekufutshane kusimahla.
Kufanelekile ukuhlala okufutshane kunye nexesha elide; I-spa, ukuhamba kunye ne-skiing (ngemizuzu engama-20 ngemoto ungaya ezintabeni).
Siya kukwamkela kwiflethi yethu entsha elungiselelwe abantu abayi-4, enamagumbi okulala ama-2, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Singalungiselela ibhedi eyongezelelweyo e-Bedarfsfall. Le ndlu ibekwe embindini, kufutshane nesikhululo sebhasi yeemitha ezili-150, ngqo kumbindi wedolophu.
Ungapaka kwisitalato sethu nakwindawo ezisingqongileyo.
Indawo yokuhlala nayo ifanelekile kwiholide yexesha elifutshane, kunye nokuhlala ixesha elide (ukuhlala ixesha elifutshane, iiholide zedolophu, iiholide ze-ski / imizuzu engama-20 ngemoto ezintabeni).
Kummandla kukho iindawo zokuthenga, iindawo zokutyela, indawo yokupaka encinci kunye neziko lokuzonwabisa iRolava.
Singathanda ukukwamkela kwigumbi lethu elitsha elixhotyiswe ngabantu abayi-4 abanamagumbi amabini okulala, ikhitshi elahlukileyo, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Ukuba kuyimfuneko, sinokulungisa enye ibhedi (ibhedi yehotele esemgangathweni). Indawo yokuhlala ikufuphi nombindi wesixeko. Iziko le-spa linokufikelelwa ngebhasi ekumgama ozi-150m kuphela.
Ukupaka kwisitrato sethu nakwiindawo ezisingqongileyo kusimahla.
Indawo yokuhlala ifanelekile ukuhlala okufutshane kunye nexesha elide, i-spa, abakhenkethi kunye nohambo lwe-ski (unokufikelela ezintabeni kwi-20min ngemoto).
Kwiindawo ezingqongileyo unokufumana iivenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutyela, ipaki encinci kunye nendawo enkulu yokuzonwabisa egama linguRolava.
Siya kukuvuyela ukukwamkela kumagumbi ethu axhotyiswe ngokungafanelekanga anezitshisi ezi-2, ikhitshi elahlukileyo, njl. Le yindlu yabantu abayi-4. Kwimeko yokuphazamiseka senza indawo ye-5 (ibhedi eyongezelelweyo esemgangathweni). Hayi kude kumbindi; ukusuka kwisikhululo kwi-150 m, kunokwenzeka ukuba udle ngokuthe ngqo kwindawo ye-spa. Ukupaka kwisitrato sethu nakwiindawo ezisingqongileyo simahla.
Indlela yokujonga ixesha elifutshane, elinjalo kunye nexesha elide lokusinda; inkukhu, abakhenkethi kunye nokuphumla kwentaba (imizuzu engama-20 kwimoto ungaya ezintabeni).
Kummandla okufutshane uya kufumana ivenkile yemveliso, iindawo zokutyela, ipaki encinci, indawo enkulu yeR.
Kummandla okufutshane uya kufumana ukutya, iindawo zokutyela, ipaki encinci, indawo enkulu yokuzonwabisa iRolava.